Waxaan joojiyaa isticmaalka Thunderbird si aan u isticmaalo KMail | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan joojiyaa isticmaalka Thunderbird si aan u isticmaalo KMail
Waligeyba waxaan ahaa isticmaale ThunderbirdRuntii waligey maan isticmaalin Muuqaalka Microsoft ka fog Muuqaalka Express. Evolution Waxaan isku dayay in cabbaar ah, iyo sidoo kale clawmailLaakiin labadan dambe midkoodna ma jecla.
Loo adeegsaday Thunderbird Sababtoo ah ku darista aan rakibay, iyo gaar ahaan mawduuca / maqaarka aan dul saaray, runtii wuu soo jiitay.
Kadib waxaa yimid Thunderbird v3 ... mawduucayduna waa inaan joojiyaa isticmaalkiisa maxaa yeelay isma waafaqsana, oo ay weheliso maqaarka qaar ka mid ah wax lagu daro, laakiin waxba ma dhacaan ... Waxaan isticmaalay maqaar kale oo nasiib wanaag aan helay Laakiin, Thunderbird v4 waxay meteshay isla mushkiladda ... iyo v5, v6, iwm iwm ... oo waxaan ku jirnaa v11, iyo dhammaan noocyada iyo maqaarka aan isticmaalay, ma jiraan cid u hartay.
Waxaas oo dhan waxay iga dhigeen inaanan ku faraxsanayn Thunderbird, laakiin wali ma aanan helin bedelkiisii ​​saxda ahaa ee isaga ... illaa iyo haddana, waxaan siiyay fursad KMail.
Muhiimadu waxay tahay maalmo kooban ayaan isticmaalayay KMail, oo 99% waan ku qanacsanahay 😀
Tusaale ahaan, waxay i siisaa ikhtiyaarro aan ugu habeeyo sida macaamiisha kale ee e-maylka ah ... laakiin haye, kuwa innaga ah ee adeegsada KDE maadaama aan u baranay midigtaan? OL LOL !!
Sidoo kale, isticmaal Akonadi oo illaa iyo hadda waxba (laakiin MAYA WAXBA) waa khalad, tani waxay u oggolaaneysaa dhowr codsi inay wadaagaan isla xogta ...
Faa'iidooyinka aan hadda adeegsanayo KMail?
Si ka duwan sidii hore, hadda waxaan isticmaalaa macmiil boosto oo ah Qt, ku habboon KDE.
Waxaan haystaa ikhtiyaarro badan oo aan ku kala habeyn karo, tusaale ahaan hadda waxaan gacanta ku hayaa ogeysiisyo kala duwan, toobiye-yada gaaban, iwm
Waxyaabaha sida fudud u riixaya badhanka dhow (iskutallaabta geeska) MA xirayo dalabka, laakiin wuxuu dhigayaa santuuqa nidaamka (saxaarad), ee Thunderbird Waxaan u baahanahay addon ... gudaha KMail maya, ikhtiyaarka halkaas ayaa laga heli karaa 🙂
Ikhtiyaarka loo heli karo shaqada kooxeed IMAP
Qarsoodi iimaylka adoo adeegsanaya algorithms sida Furan.
Miyaan hore u idhi waan beddeli karaa dhammaan midabada dalabka? Ma sameeyaa maqaarkayga aniga oo gujinaya uun? ...
Ku abaabulo emaylkeyga adoo calaamadaha/tags ... sida haddii laga sameeyay goob lagu sameeyay WordPress Waxay ahayd ...
Oo tan iyo markii ay kaamil noqon karin, waxaa jira qaar ka mid ah khasaaraha in Thunderbird:
Isticmaalka Akonadi ... sida kuwa ku tiirsan oo dhan, tani waxay ku noqon kartaa raaxo qaar, sida Akonadi keydso xogtaada DBs MySQL by default, in kasta oo loo qaabeyn karo in la isticmaalo SQL Lite... Waxaan ka baari doonaa hehe this.
En Thunderbird adoo dooranaya 5 emayl (tusaale ahaan) oo riixaya [Ka mid ah] (si loogu diro qashinka) oo 5 ta emayl loo calaamadeyn doono «Horey u aqri«, Oo weliba loo diray dambiisha qashinka, intaad ku jirto KMail Kaliya waxaa loo diraa qashinka, ka dibna waxay iila muuqdaan sida 5 emayl oo qashinka ku jira laakiin lama akhriyo (tan waxaan garwaaqsanahay in qaarkood ay umuuqdaan doqonimo haha)
Iyo su'aasha dahabiga ah…. Kee baa cunaya ilo badan? ...
Waa hagaag, KMail way i cuntaa 30.8MB RAM, iyo Thunderbird 31MB Marka, waa isku mid 😀
Cadee ansax ah, waan isticmaalayaa KDE 4.7.4 (KMail v1.13.7), MA adeegsanayo nooca ugu dambeeya (KDE 4.8.1), iyo Thunderbird 11 … Way fiicnaan laheyd in la isbarbardhigo nooca ugu dambeeyay ee KMail leh kii ugu dambeeyay Thunderbird, laakiin nasiib daro gudaha Debian weli KDE 4.8 Kaliya waa riyo fog
Ma xasuusto casriyaynta / isbeddelada ay leeyihiin noocyo badan KMail, sidaa darteed waan rajeynayaa 😀
Emailkee macmiil ah ayaad isticmaashaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Waxaan joojiyaa isticmaalka Thunderbird si aan u isticmaalo KMail
Waligey wax dhibaato ah kuma qabin Kmail… Aniguba intaas uma isticmaali karo, waxay noqon doontaa maxaa yeelay waxaan haystaa hal koonto oo inta badan waxaan kala taliyaa biraawsarka. Wali iskuma dayin macmiilka Opera wali waxaanan u qaatay sidii caadiga biraawsarka
Waxaan isticmaalaa midka ku soo kordha Opera, waxaan u isticmaalaa kmail si aan u tijaabiyo, laakiin howlaha Opera ii keena waa igu filan yihiin, mana aqaano inay keeneyso wax kabadan ama kayar kmail, wadar ahaan, waligey ma isticmaalo dhammaan xulashooyinka barnaamijka. (Wali waxaan ogaanayaa shaqooyinka kwin)
Marnaba ma isticmaalin mid Opera mid ah, laakiin ma jecli fikradda ah in macmiilka iimaylku uu ku xirnaado biraawsar, waxaan ka door bidaa inay kala
Haa, laakiin halkii aad ka heli lahayd 3 ama in ka badan oo barnaamijyo ah ayaa had iyo jeer furan, biraawsar, emayl, RSS akhristaha, qoraalada, wax walbaa waxay ku jiraan Opera in, sidaad horayba u ogayd, xitaa lagu yarayn karo saxanka nidaamka.
Haa waxaan u maleynayaa in aragtidaas ay macno samaynayso, laakiin waxaan jeclahay (wax shaqsiyadeed) in waxyaabo la kala qaybiyo oo la abaabulo ... tusaale ahaan, haddii hadhow aan rabo inaan joojiyo isticmaalka Opera oo aan isticmaalo Rekonq, waan kari waayey, maxaa yeelay waxay kuxirantahay Opera aniga ii dir email 🙂
Tilmaanta qaar ka mid ah howlaha kmail waxay noqon laheyd mid xiiso leh, gaar ahaan isticmaalka gpg ama qaabeynta xisaabaadka qaarkood, bilowgii waxaan xoogaa ku dhibtooday tafaasiisha.
waayadan dambe waxaan isticmaalaa gpg si aan u xareeyo faylasha oo aan ugu keydiyo daruurta (keyd ahaan).
Haa, ma xumaan laheyd 😀
Waan arki doonaa haddii aan tilmaamo ka sameeyo KMail hahaha.
Hagaag, waxaan isku dayay daraasiin jeer, laakiin aakhirka Kmail wuu kufashilmay in kabadan qori caaradiis. Halka mararka qaarkood ay si fiican u shaqeysay, mararka qaarna si lama filaan ah ayey u noqoneysaa mid gaabis ah Waxaa igu dhacday in markaan dhagsiiyo fariin si aan u aqriyo, ay igu qaadatay in ka badan 10 sekan in la furo. Sida isticmaale KDE ah, waan ku farxi lahaa inaan ka dhigo macmiilkeyga ugu weyn, laakiin marwalba waxaan ku noqdaa inaan ku soo laabto Thunderbird, si ka baxsan pragmatism-ka.
Iyo, dhanka kale, iima ogola in aan maareeyo akoonadayda 5 e-mayl isla waqtigaas, qaab fudud. Waxaan u maleynayaa inay wali tahay barnaamij weyn, laakiin ma haqabtireyso filashadeyda ama ma dabooleyso baahiyaheyga.
Hagaag, ilaa iyo haatan wax dhibaato ah ma ahan ... laakiin haddii waxaas aad dhahdo ay bilaabmaan inay dhacaan ... uff ... Waa inaan ku laabto Thunderbird LOL !!
Ka soo horjeedka aniga ii dhig, dhibaatooyinka eber iyo nooca ugu dambeeya ayaa ka xasillan sidii hore.
Hyoga Hubin dijo
Gebi ahaanba ku raacsanahay. Dhowr bilood ka hor waxaan isku dayay Kontact oo ku saabsan Kubuntu boostada Kmail-na waa ay dhimatay, iyadoo aan loo sheegin taas sabab la’aan awgeed, xiriirada waa la waayey laakiin tan iyo markii ugu dambeysay ee la soo saaray, horumarku wax badan buu ahaa waana ka xasilloon yahay.
Ku soo jawaab Hyoga Assure
Dhibaatadu waa Kubuntu: Waxaan u imid Arch anigoo raadinaya distro meesha ay KDE SC si fiican uga shaqeysay iyo farqiga u dhexeeya Kubuntu iyo Arch + KDE waa wax aad u xun. Kubuntu waa mashiin samaynta shiishka, oo ay ka buuxaan qaladaad iyo cilado meel kasta oo aad ka eegto, gebi ahaanba buuxan oo xamaasad leh, oo leh jawaab culus, aan raaxo lahayn oo gaabis ah KDE ... gudaha Arch, KDE waa iftiin sida LXDE ee Ubuntu waana sidoo kale aad u xasiloon, gaar ahaan Kmail iyo dhammaan Kontact suite (KDE 4.8.4-3).
Salaan !! Hagaag waan soo koobayaa. Dhibaato ayaan ku qabaa kmail Waxaan u sameeyaa dhammaan tallaabooyinka si sax ah illaa aan ka helo fariinta soo socota:
: Ma awoodo in lagu soo galo serverka pop.mail.yahoo.com.
Pop.mail.yahoo.com lama helin. Furaha sirta ahi wuu khaldami karaa.
Adeegaha ayaa ku jawaabay: "[AUTH] Helitaanka adeegan lama ogola."
Markii aan aqriyay, Yahoo ma ogola in POP la isticmaalo. Miyaad awood u yeelatay inaad ka hubiso Yahoo! macaamiisha kale ee IM ee isticmaalaya POP?
Waan ka xumahay KZKG ^ Gaara oo ku soo jawaabtay goor dambe. Hagaag, khaladka waxaa sabab u ahaa xaqiiqda ah in ikhtiyaarka boostada ee POP aan lagu awoodin xulashooyinka boostada. Si wanaagsan oo farxad leh ayey iigu shaqeysaa kmail oo aad ayaan ugu mahadnaqayaa ka jawaab celinta.
Ha walwelin, kuligeen waxaan leenahay waxyaabo aan sameyno do
Hagaag ... Waan ku faraxsanahay inaan ogaado in dhibaatadaada la xaliyay
Waxay igu abuurtay dhibaato kde 4.8, waxay ahayd wax akonadi uusan ku bilaaban, laakiin sifiican uma xasuusto, aakhirkii waxaan doortay inaanan u isticmaalin macmiil macaamiil ah Linux.
Oo maxay dogob kaa tagtay? ... si fiican Akonadi ma laha rabitaan isaga u gaar ah, haddii uusan wax ku bilaabin, waa haha.
Waxay ahayd wax lamid ah * diiwaanka akonadi lama helin waana xirayaa *, berri waxaan galayaa chakra oo waxaan dhigayaa log.
Ma leedahay akonadi firfircoonaan? Faylkan ~ / .config / akonadi / akonadiserverrc hubi in xariiqa dhahayo
StartServer = run
Hagaag, ma isticmaalo macaamiisha iimaylka, waxaan si toos ah uga fiiriyaa biraawsarka webka, waxaanan haystaa in kabadan 8 xisaabaadka O.0.
Waxaan jecelahay in e-maylkeyga ila socdaan, marka markaan rabo inaan wax akhriyo kuma tiirsana internetka
Pop3 ama Imap?
POP3 marwalba 😀
Isku day IMAP qad la'aanta, waad yaabi doontaa 😀
Muxuu kaga duwan yahay POP3? 🙂
Imap offline waxay leedahay dhamaan astaamaha IMAP, laakiin waxay ku haboontahay inaad emaylladaada kuhesho gudaha, sida POP
Weli ma fahmin farqiga u dhexeeya IMAP iyo POP3 oo go'ay . - ^ U.
Labaduba emaylka ayey kombiyuutarka ku soo dejistaan, maxaa kale?
Runtii waxaan la joogaa onkodka
Waxaan isticmaalaa macmiilka Opera, waxaan doorbidaa inaan wax walba ku haysto mid, mid mid, dabcan, macmiilku wuxuu leeyahay xadidiisa, laakiin wuxuu si fiican ulaqabsadaa jawiga desktop-ka, wuxuu si buuxda ula shaqeeyaa IMAP (GMail, GMX iyo MyOpera), iyo wuxuu leeyahay muuqaal ka nadiifsan onkodka
Laga soo bilaabo akonadi u sqlie waxaan ka helay tan bogga caawinta kde
Maxaa loo isticmaali waayey sqlite?
Waan isku daynay. Runtii. Kaliya sifiican uma maamuli karto marin u helka isla markaa.
Fadlan tixraac  wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan mawduucan.
Xaaladda: la shaqeynta xaddidnaanta, dib-u-soo-celinta nidaamka mobilada
Hababka la taageerayo: Lagu rakibay
Arimaha la yaqaan:
Waxaa loo baahan yahay nooc ka cusub kan caadiga ah ee Qt.
Waxay ubaahantahay darawal QtSql ah oo la dhejiyay si loo xaliyo arrimaha isku dheelitirka (Akonadi wuxuu maraakiib darawal ah ula socdaa isbedelka lagama maarmaanka ah)
Ka gaabiya MySQL
Way fiicnaan laheyd maxaa yeelay way fududahay laakiin waxay umuuqataa inaysan shaqeyn: /
Xogtaas bogga aad ka qaadatay? Oo yep, aad uxun…… way fiicnaan laheyd in loo isticmaalo sidaas…
Waxaan ka soo qaatay KDE techbase: http://techbase.kde.org/Projects/PIM/Akonadi#Why_not_use_sqlite.3F
Ah qiimo leh kun mahadsanid 😀
Hambalyo, Kmail waa mid aad u awood badan, aad iyo aad u badan oo mararka qaarkood xitaa jahwareer ah ... aniga gaar ahaan Debian Squeeze wali kuma guuleysan inaan email ka diro koontada IMAP oo aan ahayn tan caadiga ah ...
Waan ka xumahay, waxaan ula jeeday SMTP.
Xulashooyinka - »Xisaabaadka -» Soo dir 🙂
Cadeyn sax ah, waxaan isticmaalayaa KDE 4.7.4 (KMail v1.13.7)…
Ma xasuusto waxa hagaajinta / isbeddelada ay leeyihiin noocyada KMail ka sareeya, sidaa darteed iyaga ayaaba isha ku haya 😀
KMail-ka aad isticmaaleyso kuma koobna Akonadi. Waxay ahayd inaad ka xirto koontadaada KMail ka dibna aysan ka muuqan konsole-ka Akonadi, sax?
Mid ka mid ah hagaajinta Kmail 2 (KDEpim 4.6 iyo ka sareeya) waa isdhexgalka Akonadi, iyo sidoo kale waxyaabo badan oo aad adigu naftaada ku arki doontid (Waa hagaag, Debian weli waxaa ka maqan xD-gaas).
Waan isticmaali jiray tan iyo maalmihii KDE 3.X. Kuuma sheegi karo markii aan bilaabay isticmaalkiisa, laakiin waxaan ogahay inaan bilaabay isticmaalkiisa ka dib markii "aan ka tagay" Thunderbird 1.X 🙂
Haa, waa inaan kudarsadaa gacanta haha ​​... haa haa, waxaan xasuustaa in KDE 4.8 mid ka mid ah horumarintu waxay ahayd in KMail wax badan la hagaajiyay, gaar ahaan (sidaad u tiraahdo) way is dhex gashaa (sidoo kale waxay ku xiran tahay) inbadan oo Akonadi ah .
Waxaan rajeynayaa 5-ta bilood ee soo socota ... si aan u arko haddii KDE 4.8 ugu dambeyn ay soo gasho Debian Testing LOL !!
Ka warran Arch?
Arch wuxuu i siiyay dhibaatooyin badan many…. dhammaantood waxay la xiriiraan kernel, laakiin in ka badan ayaa ku filan.
Waxaan kugula talinayaa inaad raadiso Liiska Booska 'plasmoid' Waa ogeysiis fariin ah oo la midoobaya Akonadi sidaa darteedna looma baahna inaad marwalba furto Kmail 🙂
ooo anigu ma aqaan isaga, isha ayaan ku hayaa hehehehehe 😀
Waad ku mahadsantahay tilmaanta 😉
Miyaad ilaawday inaad sheegto in Lion Mail uu adeegsado IMAP.
KMail v1.13.7 ma isticmaashaa Akonadi? Waan hubaa in Kmail2 ay tahay waxa isku dhafan, laakiin ma dhihi karo sidaas maxaa yeelay waxaan isticmaalayaa nooc yar oo duugoobay oo ah KDE, 4.6.5.
Waxaan arkay hadalada Annubis, ma aanan aqrin. Runtii taasi waxay ahayd horumarkii weynaa ee Kmail2 iyo inay timid KDE 4.7 hadaanan qaldamin, laakiin diro badan ayaan is dhex galin maxaa yeelay xoogaa weyna weynaatay.
Aniguba ma isticmaalo macmiil fariin, waxaan si toos ah uga arkaa webka, waxaan ku leeyahay xDDD gmail iyo hotmail. Waxaan isticmaalaa rakibo Firefox ah "ogeysiinta webmail" markii aan helona, ​​astaanta ayaa ifaysa 😛
Oo markaan ka maqnaado kumbuyuutarkeyga, emayllada ayaa gaaraya taleefankayga gacanta 😛
Waxaan bilaabay adeegsiga KMail 4.8.2 ee Slackware dhowr maalmood ka hor, waa wax fiican oo waxaan lahaa khibrad isku mid ah oo aad ku sharaxdo Thunderbird, barnaamij runtii aan wax qalad ah lahayn, kaliya in yar oo ka mid ah waxaan noqoneynaa mid aad u baahi badan waxaan dooneynaa in wax walba lagu daro KDE-keena qaaliga ah.
Waad ku mahadsan tahay talooyinka, hadda waxaan helay ikhtiyaarka astaanta ku jirta saxaaradda nidaamka, waxaan bilaabay inaan raadsado iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda aan ogaaday in ay jirto.
Ku jawaab eddojh
Waad ku mahadsantahay inaad ka tagtay faallooyinka 😀
Haa runtii, Thunderbird maahan (waxaan u maleynayaa) ikhtiyaarka ugu fiican haddii aad isticmaasho KDE, maxaa yeelay si fiican uma dhexgaleyso deegaanka, halka KMail loogu talagalay inuu noqdo macmiilka # 1 ee KDE ... wax maahan maya? 🙂
Salaan iyo soo dhawow goobta.
Waxaan isticmaalayay Kmail muddo ku dhow 2 sano waxaanan ku leeyahay koontadayda emailka POP3.
Runtu waxay tahay aniga aniga waa maamulaha emaylka ugu fiican ee jiri kara. Thunderbird way fiican tahay, laakiin Kmail wuu dhammaystiran yahay oo wuxuu cunaa ilo yar.
Adoo jidka ag jooga, qofna ma ku arkay qaladkan akoonadooda 'POP3' loo qaabeeyey? Waxaa dhacda in emayllada qaarkood ay kharribmaan oo ay noqdaan wax aan macquul ahayn in la akhriyo, astaamo qariib ah sida:
Ma aqaano inay tahay sababta oo ah Kmail-kayga uu musuqmaasuq yahay ama in badan oo emayl iigu jira sanduuqa sanduuqa….
Waxaan isticmaalayaa Kmail: Hore ayaan u qaabeeyay .. Laakiin sidee uga dhigayaa inay ku sii furnaato guddiga oo aysan ahayn inaan ka tago daaqad furan markasta?
Xulashada Kmail »Muuqaalka» Nidaamka Nidaamka »Ku dhaqaaji astaanta saxanka nidaamka.
Waxaan adeegsan jiray boostada Opera oo si aad u wanaagsan u socota, arinta ayaa ah sida aad ku ogaan doontid Opera 15 inay ka furayaan biraawsarka, hadana si gooni gooni ah ayey u shaqeeyaan - Linux wali ma heysato nuqulkeeda wali, marka aniga ' Waxaan raadinayaa inaan helo macmiil kale oo boosto ah. Keebaad ku talinaysaa? Kmail weli ma sidaas baa lagula talinayaa? Mahadsanid.
Had iyo jeer waan aqriyaa qoraaladaada waana i xiiseeyaan, hadda, waxyaabo nolosha ka mid ah, dib ayaan ugu soo noqday tan. Google wuu i keenay maxaa yeelay waxaan isku dayayaa inaan uga tago Thunderbird boqolaal kun oo add-ons ah, ugu yaraan kan guriga jooga, waxaanan isku arkaa dhibaato.
Ma taqaanaa sida loo akhriyo calaamadaha Thunderbird sidoo kale Kmail? Shaqada iyo guriga waxaan isku adeegsadaa sumado isku mid ah, taas oo macnaheedu yahay haddii aan ku calaamadeeyo "inaan ka jawaabo" hal bog, waan la xiriiri karaa kan kale oo aan arki karaa kuwa ay tahay inaan ka jawaabo Kmail-ka ma aqaano sida loo helo macluumaadkaas, oo sida muuqata ku jira farriinta lafteeda. Fikrado kasta?
Tani waxay ahayd booskii aan raadinayay.
Maalmo ka hor waxaan bilaabay isticmaalka kmail, wax walbo waa ok,
si fiican, ku dhowaad wax walba.
Waxay soo baxday in hadda kadib markii la fuliyo, nidaam cunaaya 50% processor-ka la kiciyay. Ninka "ninka" waxaa lagu magacaabaa: akonadi_imap_resource.
Ma jiraa qof fikrad ka haysta sida loo xaliyo tan?
Jawaab Jose Javier
Waxaan isku dayay Kmail oo ku saabsan linka Chakra runtiina waxay tahay inay qaadatay waqti dheer in la furo emayl kasta. Sababtaas darteed ayaan u furey oo aan u sii waday isticmaalka Thunderbird kharashka luminta is dhexgalka buuxa ee kde.
Amigso si jaanis ah ayaan ugu qariyaa menu-ga kmail mana arki karo mar dambe, sidee baan dib ugu heli karaa. Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto, mahadsanid
Miguel Carmona dijo
Waxay iigu yeedhay dareenkayga:
4. Ikhtiyaar u diyaar ah shaqo kooxeed IMAP
Ma ii sheegi kartaa waxa ku saabsan shaqada kooxeed iyada oo loo marayo IMAP?
Jawaab Miguel Carmona
Biraheena Bilaashka ah